Archive du 20190413
Volaben’ny ladoany sy CNaPS Robaina amin’ny fomba mihaja ?
Sesilany ny fanesorana sy fanendrena olom-panjakana ambony eto amin’ny tany sy ny fanjakana ary matetika misy foana io isak’izay misy filankevitry ny minisitra. Am-polony maro ary mananika ny an-jatony isak’izay mandeha. Fanatsarana noho ny fiovan’ny mpitondra eto amin’ny firenena no ambara fa hevi-dehibe fonosin’ireny, saingy maro ny mandika fa mba fanomezana valim-babena ny ekipan’ny filoha tamin’ny fampandaniana azy.
Andry Rajoelina Filoha tsy manan-kambo
Tao anatin’ny fotoam-pahatsiarovana ny fotoana 29 martsa 1947 nagidy tamin’ny Malagasy no nireharehana sy nandokafan’ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina an’i Sénégal. Tsy sanatria gejain’ny tantara sy ny lasa na koa mivoy fifandrafiana tokony hohadinoina fa fotoana tena tsara hamoahana an’ireny ve ny fotoam-pahatsiarovana ny 29 martsa 1947 ?
Hanitra Razafimanantsoa “Tsy tokony hifandrafy ny DINIKE sy ny TIM”
Tsy tokony hifandrafy ny DINIKE (DINika Iombonan-KEvitra) sy ny TIM (Tiako I Madagasikara), ary tsy misy olana mihitsy eo amin’ny roa tonta, ho an’ny boriboriborintany voalohany, hoy ny kandida Hanitra Razafimanantsoa. Ny DINIKE, dia hanohana ny an’i Marc Ravalomanana rehefa tonga eo anivon’ny Antenimieram-pirenena.
Fanonganana an`i Rivo Rakotovao Ketrehina amin’ny fivoriana manaraka…
Raha ny tontolon’ny politika no hanaovana jery todika nandritra ny telo volana nijoroan`ny fitondrana Mapar dia saika mitodika betsaka amin’ny lonilony sy valifaty politika. Maro ireo mpanao politika na mpandraharaha tsy mitovy firehana amin`ny fitondrana no any am-ponja na niakatra fitsarana. Eo ihany koa ny tsy fahamatoran`ny mpanao politika izay miovaova loko.
Sekretera mpanatanteraka vaovaon’ny BNGRC « Hanao laharam-pahamehana ny fitantanana mangarahara »
Tontosa omaly tetsy amin’ny birao nasionaly misahana ny loza sy tandindon-doza na BNGRC etsy Antanimora ny fifamindram-pahefana teo amin’ny sekretera manatanteraka teo aloha, Thierry Venty sy ny vaovao, Elac Olivier Andrianjaka. Hatao laharam-pahamehana, hoy ny sekretera mpanatanteraka vaovao, ny fanamafisana ny fiaraha-miasa amin’ny mpiara-miombon’antoka satria matetika misy ny tsy mahafa-po azy ireo.
Gare Routière MAKI Andohatapenaka Lasa gaboraraka tanteraka
Lasa gaborakaka tanteraka ny eny amin’ny toby fiantsonan’ny taksibrosy eny Andohatapenaka amin’izao fotoana. Ankoatra ny fisian’ireo mpanera izay mandrirotra ireo mpandeha etsy sy eroa mantsy dia efa feno mpivarotra amoron-dalana ihany koa eny an-toerana ka mampitaraina ny maro.